Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka oo ka hadlay mowqifka ay ka qabto dowladda Mareykana arimaha Soomaaliya – Walaal24 Newss
December 23, 2018	161	By walaal24
Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsan arimaha Afrika danjire Tibor Nagy ayaa cadeeyay taageerada buuxda ee dowladda Maraykanku la garab taagan tahay dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Danjire Tibor Nagy oo shir jaraa’id ku qabtay Washington ayaa si cad hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay Midnimada iyo wadajirka dhul ahaaneed ee Soomaaliya wuxuuna yiri.
“ Wada jirka dhul ahaaneed ee dalka Soomaaliya waa arin muhiim u ah Midowga Afrika. Markaa Maraykanku wuxuu la dhaqmayaa dawladda federalka ee Soomaaliya ee xarunteedu tahay Muqdisho, Waxaanu intii awoodayada ah samaynaynaa inaanu xoojinno dalwaddaas dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba, Waqtigaan siyaasadda Maraykanku waa inay si toos ah ula dhaqanto dawladda Federaalka ee Soomaaliya.”
Soomaaliya iyo Maraykanka waxaa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah oo saaxiibtinimo, waxayna dowladda Maraykanku safka hore kaga jirtaa dalalka saaxiibada ah ee aad u daneeya arimaha Soomaaliya, wuxuuna Soomaaliya ka taageeraa dhinacyada Amniga, Horumarinta adeegyada bulshada iyo dib u soo noolaynta Kaabayaasha dhaqaalaha.
Shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka oo ka furmay Baydhabo
Ciidamada Jabuuti iyo Al shabaab oo dagaal ku dhex maray Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan